Juventus oo usoo gudubtay Siddeed Dhamaadka Champions League +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Juventus oo usoo gudubtay Siddeed Dhamaadka Champions League +SAWIRRO
Juventus ayaa guul soo laabasho cajiib ah oo ay dhawr daqiiqo ku samaysay waxay Wembley Stadium kaga soo gaadhay Tottenham oo iska lumisay fursad wayn oo ay u haysatay in ay u soo baxdo siddeed dhamaadka UCL laakiin isbadalo uu Allegri shaxdiisa ku sameeyay ayaa sabab wayn u noqday in Juventus ay soo laabasho ka samaysay gool ay Tottenham ay hogaanka ciyaarta ku haysay ilaa daqiiqadii 63 aad.
Gonzalo Higuain iyo Paulo Dyabala ayaa dhaliyay labada gool ee ay Juventus ku khaarajisay kooxda Tottenham oo qaybtii hore iska lumisay fursad ay ciyaarta gabi ahaanba ku dili kartay. Khibradii Allegri iyo ciyaartoyda Juventus ayaa galaafatay Spurs.
Tottenham ayaa u baahnayd in kaliya ay ilaashato natiijadii barbaraha 2-2 ahayd ee kulankii lugtii hore si ay u xaqiijisato booskeeda sidded dhamaadka UEFA Champions league maadaama oo ay sharciga goolasha martida ah ku soo baxsanayd laakiin Juventus oo ku qasbanayd in ay shabaqa Spurs gaadho si ay u soo bixi karto ayaa qaab difaacasho iyo weerar aan dardar lahayn ciyaarta ku bilaabtay.
Qaybtii hore ee ciyaarta Tottenham ayaa noqotay kooxdii dadaalka ugu badan iyo shaqada ugu fiican garoonka ka qabtay iyada oo dhibaato badan ku abuurtay Juventus. Tottenham ayaa fursadihii ugu badnaa qaybtii hore abuurtay waxayna ahayd kooxda markasta goolal laga filan karayay iyada oo Buffon iyo difaaca Old Lady ay mashquul badan u ahayd.
DAQIIQADII 39 aad Tottenham ayaa ugu danbayn heshay abaal marinta shaqadii adkayd ee ay soo qabtay waxaana goolka furitaanka u saxiixay xidiga wacdaraha dhigaya ee Son Heung-Min kaas oo shabaqa Juve ku hubsaday kubbad caawin uu ka helay K. Trippier waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Tottenham hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
Goolkan ayaa xaalada ku sii adkeeyay Juventus oo markii horeba u baahnayd in ay ugu yaraan gool dhaliso laakiin kooxda Allegri ayaa qaybtii hore ee kulankan ku fashilantay in ay hal mar tijaabiso goolhaye Lloris kaas nasasho fiican qaybtii hore iska qaatay.
Tottenham ayaa shan darbo ku bartilmaameedsaday goolhaye Buffon halka Old Lady ayna qaybtii hore samayn wax bartilmaameed ah waxayna taasi keentay in Spurs ay ahayd kooxda si buuxda u lahayd awooda sare ee ciyaarta waxaana qaybtii hore lagu kala nastay 1-0 ay Tottenham hogaanka ciyaarta ku haysay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay wali Tottenham sii ahayd kooxda awooda sar lahayd ee laga filayay in ay gooolka labaad la iman kartay laakiin Juventus ayaa awooday in aan gool kale laga dhalin si ay rajadeeda u sii ilaashato.
DAQIIQADII Allegri ayaa kaydka kooxdiisa ku laabtay wuxuuna soo kiciyay Lichtsteiner iyo K. Asamoah wuxuuna ciyaarta ka saaray M. Benatia iyo B. Matuidi markiiba isbadalka uu Allegri sameeyay ayaa ciyaarta ka dhigay mid gabi ahaanba ka duwan xaaladii hore.
DAQIIQADII 64 AAD Juventus ayaa ciyaarta dib ugu soo laabtay kadib markii uu Gonzalo Higiuan uu dhaliyay goolka rajada Old Lady soo nooleeyay iyada oo Spurs ku fashilantay in ay la tacaasho kubbad uu soo karoosay xidiga kaydka ka soo baxay ee Lichtsteiner waxaana kubbada Higiain ka sii caawiyay Khedira iyada oo ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
DAQIIQADII 67 AAD Alla maxay layaab lahayd! Juventus ayaa si aan la rumaysan karin daqiiqado gudahood ciyaarta dhinaca kale ugu dhigtay kadib markii uu Paulo Dybala oo inta badan ciyaarta ku dhex lunsanaa uu qaab cajiib ah u dhamaystiray goolka labaad ee Old Lady isaga oo caawin ka helay Higian wuxuuna Dybala ciyaarta ka dhigay 2-1 ay markeeda Juventus hogaanka kula wareegtay.
Haddii Tottenham ay 1-0 hogaanka ciyaarta ku haysay daqiiqadii 63 aad waxay daqiiqadii 67 aad ay is aragtay iyada oo 2-1 hogaanka ciyaarta looga hayo. Tottenham ayaa markan ku qasbanaatay in ay raadiso goolka labaad si ay ciyaarta oo natiijada wadarta ay Juventus ku soo baxsanayd ay u badali karto.
DAQIIQADII 78 AAD CHIELLINI ayaa si laayableh kooxdiisa Juventus uga difaacay gool cadaan ahaa oo uu Harry Kane ku dhalin lahaa kubbad goolka Juve la soo hormariyay wuxuuna Chiellini kasbaday in si wayn ay ciyaartoyda kooxdiisu ay ugu hambalyeeyaan.
Intaa wixii ka danbeeyay Tottenham ayaa noqotay kooxda uu cadaadiska xoogani ku saarnaa in ay ciyaarta ku soo laabato halka Juventus ay biladay in ay khibrad ahaan isticmaasho si ay natiijada ciyaarta u ilaashato.
DAQIIQADII 90 AAD Cabiib, Cajiib! Sidayna gool u noqon? Harry Kane ayaa u muuqday in uu dhaliyay goolka ay Tottenham wadno xanuunka ugu jirtay inkasta oo uu si cadaan ah ugu jiray offside haddana calanwadaha ayaan waxba ka hadal laakiin darbo uu Kane madaxa ku tuuray ayaa birta goolka ka soo booday waxayna sii galaysay goolka Juventus laakiin ma rumaysan kartid qaabkii layaabka lahaa ee uu Barzagli xariiqda goolka uu kubbada uga sooc celiyay.
Wax walba oo ay Tottenham u samaysay in ay goolka labaad ku keensato waxay ku fashilantay in ay dhaafto Juventus oo aan wax qalad ah ka samayn labada gool ee ay waqtiga kooban ku badashay xaaladii murugada lahayd ee ay ku jirtay waxayna Tottenham u sheegatay khibrad iyo waayo aragnimo.
Si kasta ha ahaatee, Juventus ayaa u soo baxday siddeed dhamaadka UEF Champions League halka Tottenham oo isku arkaysay inay soo baxaysaa ay macasalaamaysay tartanka kooxaha Yurub ee UCL. Juventus ayaa ku biiray kooxdaha Real Madrid, Liverpool iyo Manchester City oo u soo baxay wareega siddeed dhamaadka Champions League.